किन जन्मिन्छन् त तेस्रो लिङगी ? यस्तो छ वैज्ञानिक कारण:: Naya Nepal
किन जन्मिन्छन् त तेस्रो लिङगी ? यस्तो छ वैज्ञानिक कारण
काठमाडौँ । यो संसारमा धेरै प्रकारका मानिस हुन्छन । भनिन्छ मनुष्य योनिमा २ प्रकारका मानिस हुन्छन पुरुष र महिला । तिनिहरुमा यस्तो मान्छे पनि हुन्छन जुन हामी भन्दा केहि फरक हुने गर्छन । जसलाई हामी ट्रांसजेंडर अर्थात तेस्रोलिङगी भन्छौं ।
यि कारणहरुले शिशुहरु तेस्रो लिङगी बन्नेगर्छन
१. रुघाखोकी ज्वरो (प्रेग्नेंसीको पहिलो ३ महिनामा यदि गर्भवती महिलालाई रुघाखोकी ज्वरो आइरहेको छ र यदि उसले कुनै हेभि मेडिसिन खाएमा ।
२. मेडिसिन्स प्रेग्नेंसीमा महिलाले यदि कुनै प्रकारको औषधि खाएको खण्डमा जसले गर्दा शिशुलाई नोक्सान हुन सक्छ ।
३. टाक्सिक फुड यदि प्रेग्नेंसीको समयमा गर्भवति महिलाले टाक्सिक फुड जस्तै केमिकली ट्रीटेड वा पेस्टिसाइड्स फ्रूट वेजिटेबल्स खाएमा ।
३. दुर्घटना वा रोगी –प्रेग्नेंसीको पहिलो ३ महीनामा कुनै प्रकारको दुर्घटना वा रोगी भएमा शिशुको आर्गन्सलाई नोक्सान भएमा ।
५. जेनेटिक डिसआर्डर –जेनेटिक डिसआर्डरको कारणले पनि शिशुको लिंग निर्धारणमा असर पर्न जान्छ ।
६. इडियोपैथिक वा अज्ञात –ट्रांसजेंडर बच्चा जन्मीनुमा अधिकांश इडियोपैथिक हुने गर्छन अर्थात समय रहुन्जेल यिनिहरुको कारणको बारेमा थाहा पाउन सकिन्न ।
७. गर्भपतनको औषधि (यदि गर्भवती महिलाले डाक्टरको सल्लाह विना नै आफैले गर्भपतनको औषधिको रुपमा घरेलु औषधि प्रयोग गरेको खण्डमा तेस्रोलिङगी बच्चा जन्मीन सक्छ ।
१, डाक्टरको सल्लाह विना कुनै पनि प्रकारको औषधि नखानुहोस , यहासम्म की ज्वरो र रुघाखोकीको पनि औषधी खानु हुदैन।
२, हेल्थी डाइट अनुसारको खानेकुरा खानुस , बाहिरको खाना सकेसम्म नखानुस ।
३, थाइराइड प्राब्लम, डायबिटीज मिर्गी जस्तो रोग भएको अवस्थामा डाक्टरको सल्लाह पछि मात्र प्रेग्नेंसी प्लान गर्नु राम्रो हुन्छ ।
४, प्रेग्नेंसीको पहिलो ३ महीनामा ज्वरो रुघाखोकी भएमा सीरियसली मानेर डाक्टरलाई देखाउन उत्तम मानिन्छ ।
५, प्रेग्नेंसीको समयमा कुनै पनि प्रकारको नशालु चिजको सेवन गर्नु हुदैन ।